Natiijooyinka Sahanka: Sidee Suuqyayaashu Uga Jawaabayaan Aafada iyo Qufulka? | Martech Zone
Natiijooyinka Sahanka: Sidee Suuqyayaashu Uga Jawaabayaan Aafada iyo Qufulka?
Khamiista, Diseembar 24, 2020 Khamiista, Diseembar 24, 2020 Conor Cawley
Maaddaama xirnaashaha ay fududaanayso shaqaale badana dib ugu soo laabanayaan xafiiska, waxaan daneynay baaritaanka caqabadaha ganacsiyada yar yar ay kala kulmeen cudurka faafa ee Covid-19, waxa ay ka qabanayeen qufulka si ay u horumariyaan ganacsigooda, xirfad kasta oo ay qabteen. , tikniyoolajiyadda ay adeegsadeen muddadan, iyo waxa qorshayaashooda iyo mustaqbalkoodu yahay.
Kooxda ciyaarta Tech.co waxay sahmisay 100 meheradood oo yaryar oo ku saabsan sida ay u maareeyeen intii lagu jiray xiritaanka.
80% milkiilayaasha meheradaha yaryar waxay yiraahdeen Covid-19 ayaa lahaa saameyn xun ganacsigooda, haddana 55% waxay dareemayaan rajo aad u wanaagsan mustaqbalka
100% jawaabeyaashu waxay adeegsanayeen quful si ay u dhisaan ganacsigooda, badankooduna waxay diirada saarayeen suuqgeynta, ku xirnaanshaha macaamiisha, iyo kor u qaadista xirfadaha.
76% ayaa qaba xirfad leh inta lagu jiro xiritaanka - oo leh SEO, warbaahinta bulshada, barashada luqad cusub, iyo falanqaynta xogta oo ah xirfadaha cusub ee ugu caansan ee la barto.
Ganacsiyada la daraaseeyay waxay ka kala yimaadeen warshado isku dhafan, laakiin qaybaha ugu caansan waxay ahaayeen adeegyada B2B (28%), qurux, caafimaad & ladnaanta (18%), tafaariiqda (18%), softiweerka / teknolojiyadda (7%), iyo safarka ( 5%).
Caqabadaha Ganacsi ee Soo Wajahay
Caqabadaha ugu caansan ee ganacsiyada waxay ahaayeen iib yar (54%), oo ay ku xigto in dib loo dhigo jadwalka soosaarka iyo dhacdooyinka (54%), la halganka bixinta shaqaalaha iyo kharashaadka ganacsiga (18%), iyo saameynta fursadaha maalgashi (18%).
Dhammaan jawaab bixiyayaashii la wareystay waxay sheegeen in waqtigooda ay ku isticmaaleen wax soo saar si ay u kobciyaan ganacsigooda.
Si la yaab leh, aqlabiyaddu waxay bilaabeen inay diiradda saaraan waxa ay ku bixin karaan khadka tooska ah, iyo inay dhisaan istiraatiijiyaddooda suuq-geynta dijitaalka ah, iyagoo abuuraya waxyaabo cusub (88%) iyo dalabyo khadka tooska ah ah (60%), qabashada ama ka-qeybgalka dhacdooyinka internetka (60%), ku xiridda macaamiisha (57%), iyo kor u qaadista (55%) oo ah waxyaabaha ugu badan ee laga sameeyo qufulka.
Qaarkood waxay sheegeen inay wax uun lahaayeen wanaagsan natiijooyinka ka dhashay Covid-19, oo ay ku jiraan kororka iibka khadka tooska ah, helitaanka waqti dheeri ah oo diiradda la saaro suuqgeynta, kobaca liistadooda dirista, barashada waxyaabo cusub, soosaarista wax soo saar cusub, iyo in si fiican loo barto macaamiishooda.
Xirfadaha cusub ee ugu badan ee dadku horumariyaan waxay ahaayeen barashada SEO (25%), baraha bulshada (13%), barashada luuqad cusub (3.2%), xirfadaha xogta (3.2%), iyo PR (3.2%).
Teknolojiyada ayaa door muhiim ah ka ciyaartay guusha ganacsiga waqtigan. Zoom, WhatsApp, iyo emaylku waxay ahaayeen dariiqooyinka ugu caansan ee lagula xiriiro shaqaalaha, iyo suuqgeynta warbaahinta bulshada, suuqgeynta iimaylka, shirarka websaydhka, iyo lahaanshaha degel internet ama dukaan ayaa ah noocyada ugu faa iidada badan ee farsamada. Inta badan waxay adeegsadeen quful si ay u cusbooneysiiyaan boggooda, iyadoo 60% ay wax ka beddelayaan barta ay hadda ku shaqeeyaan iyo 25% oo dhisaya mid cusub.
Talo ku socota ganacsiyada yaryar
Inkasta oo ay jiraan dhibaatooyin soo food saaray, 90% waxay ku jawaabeen inay leeyihiin rajo wanaagsan ama aad u wanaagsan mustaqbalka ganacsigooda. Waxaan weydiinay jawaab bixiyaasha inay talo siiyaan ganacsiyada kale ee yar yar inta lagu jiro waqtigan. Kuwani waa waxyaabaha ugu caansan ee la xusay:
Pivot iyo Mudnaanta
Mudnaan siinta waxaad ku fiicantahay iyo ogaanshaha waxa shaqeeya waxaa sheegay dhowr jawaab bixiye:
U isticmaal waqtigan inaad ku fiiqdo wixii aad horeba ugu fiicnayd.
Joseph Hagen oo ka socda Streamline PR
Xoogga saar xooggaaga, ha tijaabin wax badan. Samee wax badan oo adiga kuu shaqeeya marka loo eego helitaanka macaamiisha oo aad diiradda saarto taas. Anaga ahaan, taasi waxay ahayd suuq geynta emaylka waana sii labalaabnay.
Dennis Vu ee Ringblaze
Isu dheelitirka saxda ah ee u dhexeeya dhimista kharashyada iyo maalgashiga mustaqbalka. U arag tan inay tahay fursad lagu hawlgeli karo, lagu dhisi karo kalsooni iyo daacadnimo.
Sara Price oo ka socota Adeegga Tababbarka Dhab ahaan
Tijaabi Waxyaabaha Cusub & Noqo Agile
Qaar kale waxay yiraahdeen hadda waa waqtigii ugu fiicnaa ee la dhaqaaqo, lana horumariyo lana tijaabiyo waxyaabo cusub dhagaystayaashaada, gaar ahaan waqti aan hubin.
Kartidu waa furaha, arrimuhu si dhakhso leh ayey u socdaan markasta oo aad u baahan tahay inaad isha ku hayso wararka iyo isbeddellada, oo aad si deg deg ah uga jawaabto.
Lottie Boreham oo ka tirsan BOOST & Co
Tallaabo dib u qaado oo istiraatiijiyad yeelo, si aad waqtigaaga si caqli leh ugu isticmaasho. Tijaabi dalabyo cusub oo ku saabsan macaamiishaada jira, ku dheji, ka dibna samee wareega koowaad ee aan dhammaystirnayn.
Michaela Thomas oo ka socota Xiriirka Thomas
Raadi fursado u gaar ah xaaladda. Waxaan ka faa'iideysaneynaa inta lagu jiro xilliga qufulka iyadoo la siinayo talo bixin dhisme oo bilaash ah shirkadaha shirkadaha.
Kim Allcott oo ka tirsan Allcott Associates LLP
Gaadho oo Baro Macaamiishaada
Muhiimadda ay leedahay in la ogaado oo la fahmo macaamiishaada iyo baahidooda ayaa wax badan ka jartay talooyinka ay ganacsatadu bixiyaan. Ganacsiyadu waxay adeegsan karaan quful si ay si dhab ah diiradda u saaraan dhismaha xeeladaha haynta macaamiisha.
Waxay u muuqan kartaa mid aan caqli-gal ahayn laakiin runtii qufulka nalkaaga, qeex macmiilkaaga saxda ah ee saxda ah midka aad ku habboon tahay. Ka fikir iyaga iyo caqabada ay hadda ku jiraan. Haddii aad kabaha ku dhex jiri laheyd maxaad hadda raadineysaa? Markaa hubi in badeecadaada ama adeeggaagu uu si cad ula hadlayo xalkaas. Waxaan qalad ku nahay inaan ka hadalno annaga markii aan u baahan nahay inaan ka hadalno iyo macaamiisheenna. ” ayaa yiri
Kim-Adele Platts ee Tababbarka Fulinta
Marka laga eego aragtida B2B, waxaan u maleynayaa inay muhiim tahay in la ilaaliyo xiriirka macaamiishaada oo loo ogolaado inay fahmaan inaad halkaas u joogto inaad ka caawiso oo aad ka taageerto xilligan adag. Marka haddii ay taasi soo saareyso nuxur wax ku ool ah si loogu gudbo dhibaatada, ama u xaqiijinta macaamiisha adeegyada ay iyagu gacanta ku hayaan si ay uga caawiyaan la qabsiga, waxaa muhiim ah in wadahadal la furo goor hore iyo in la sii wado la hadalka macmiilkaaga.
Jon Davis oo ka tirsan shirkadda tiknoolajiyadda ee Medius
La hadal oo xiriir la samee macaamiishaada. Soo ogow waxay rabaan inaad sameyso si aad uga caawiso xaaladooda. U isticmaal waqtigan si aad u abuurto waxyaabo hadda iyo mustaqbalkaba u wanaagsan maadaama xilligan aanu waligiis ahaan doonin.
Calypso Rose oo ku yaal dukaan internet, Indytute
Diirada saar Suuqgeynta
Waqtiyada hoos u dhaca dhaqaalaha, shirkaduhu badanaa waa inay wax gooyaan. Badanaa, waa miisaaniyadda suuqgeynta iyo xayeysiinta. Si kastaba ha noqotee, jawaabeyaal badan ayaa tilmaamay muhiimadda sii socota ee helitaanka suuqgeyntaada saxda ah.
Dadku way u furanyihiin sidii hore si ay u yeeshaan wada sheekeysiyo khadka tooska ah ah, adeegsadaan barahooda bulshada, oo ay ula xiriiraan dad cusub. Sameynta degel wanaagsan oo wax ku ool ah ayaa ka muhiimsan sidii hore.
Julia Ferrari, Naqshadeeye Webka
Dib uga noqo isku dayga inaad hadda korto oo aad ka fikirto 'wada hadalkee ayaan hadda bilaabi karaa oo u rogi kara wadahadal macmiil oo dhici kara 8-10 bilood'? '. Qufuliddu waa fursad weyn oo looga shaqeeyo mashaariicda suuqgeynta muddada-dheer.
Joe Binder oo ka tirsan wakaaladda sumcadda WOAW
Websaydh wanaagsan ayaa fure ah. Ka dhig sumaddaada shaqsiyeed. Soo bandhig markhaatiyo ka socda macaamiisha si aad u dhisto kalsooni una muujiso inaad ogtahay waxaad samaynayso. Adeegso teknolojiyad (shir fiidiyoow iyo shaashad wadaag) si aad ula macaamisho una soo bandhigto macaamiisha. Shisheeyayaashu waxay ku raaxeysanayaan inay ganacsi ku yeeshaan internetka. Muuji wejigaaga oo xal u hel dhibaatooyinkooda. Haddii aadan khibrad u lahayn ama aad u baahan tahay caawimaad ka jirta aag gaar ah, raadso kaaliye farsamo. Waxaan u adeegsanaa caawiyeyaasha inay ka caawiyaan qorista baloogga, sameynta sawirada, iyo maareynta CRM.
Chris Abrams ee Xalka Caymiska Abrams
Istaraatijiyadaha Haynta Macaamiisha
Tags: xirmooyinkamarketingxeeladaha suuq-masiibo
Conor waa Qoraa Sare ee Tech.co. Afartii sano ee la soo dhaafay, wuxuu wax ka qoray wax walba oo ka socda ololaha Kickstarter iyo bilowga bilowga illaa tiknoolajiyada tiknoolajiyada iyo teknolojiyada cusub. Taariikhdiisii ​​ballaarnayd ee majaajillada istaagga ayaa isaga ka dhigtay qof ku habboon inuu martigeliyo dhacdooyinka tiknoolajiyadda ku dhisan sida Night Start Night ee SXSW iyo Abaalmarinta Timmy ee Teknolojiyada Dhaqdhaqaaqa.
Goobaha Muuqaalka Saamiga: Saamaynta, Muuqaalo Video ah, iyo Animations
Kordhinta Qaadashada Wallet Dijital Ah Inta Lagu Jiro Aafada